10 Uninzi Iidolophu Beautiful Mandulo EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Uninzi Iidolophu Beautiful Mandulo EYurophu
EYurophu ugcwele ubutyebi bembali kunye neyantlukwano. Inyaniso, akukho mcimbi apho sihamba, uza mhlawumbi bona abali-elidlulileyo civilizations. Ngamaxesha athile, ezi iindawo ingaba uninhabited ruins. Kwelinye icala, ezi iindawo kusenokuba iindawo ukuba ingaba survived uvavanyo ixesha kwaye esihlangeneyo kwi bale mihla lwehlabathi. Gcina A Isitimela kuthatha kuwe ngomhla we-utyelelo 10 ebukeka medieval ezinemigodi Aseyurophu. Lungiselela ukubona iidolophu ezintle ngembali kuxubana kunye nobomi mihla kunye imiba umhla umva ukuya kwixesha ephakathi.
1. Most Beautiful Mandulo Town EYurophu – Delft, Inetherlands
Ukuba osikhangelayo a town ukuze encompasses a medieval bazive kwi-bale mihla lwehlabathi, khangela ngakumbi kunokuba Delft. Delft asenokungaginyeki intsimbi nabani oxhamla art kuba kubhaliwe enxulumene ngokusondeleyo Isidutch painter Vermeer. Inyaniso, ukuba nawe ngonaphakade ndwendwela isixeko, uza bazive njengoko ukuba basemazweni ukupeyinta ngokwayo. Ungasebenzisa kwakhona bazive i-essence ye-ukupeyinta xa ehamba ngokusebenzisa town. Xa ke iza medieval izakhiwo, kukho Renaissance isimbo town iholo kwaye medieval ibandla angeliso impressive leaning kwencopho. Ngaphandle ukususela ezibalulekileyo medieval architecture ukuba uza amaze kuwe, Delft kanjalo sele countless canals ukuba hamba nge-town kwaye yenza ambiance eyodwa.
Hallstatt babe k ubonakala ngathi abantu abaqhelekileyo ukuba abantu ukuba balandele picturesque tourist imijelo kwi Instagram. Kukho numerous stunning iifoto kwi ariya, kwaye xa ubandwendwelayo nedolophu, nazi ukuba kutheni. Ethabatha a engalunganga umboniso uza kufuna ezininzi iinzame ngenxa fantastic waterfront isixeko sele, ebizwa i-amazing emehlweni. kwakhona, lonke jonga nokuva ye-town uza kushiya kuwe kwi-awe. Wonke ndawo sele a Baroque bazive kuyo, kwaye kunjalo impressive ukuba kwaba deemed a UNESCO zamagugu isayithi. Amava i-medieval bazive ka-Hallstatt kwindlela yakho elilandelayo uhambo ku Austria.
3. Most Beautiful Mandulo Town EYurophu – Echternach, Luxembourg
ngempelaernach ingaba oldest town kwi-Luxemburg, kwaye ibekwe jikelele kweendonga zetempile Echternach Abbey. Kubalulekile ekhaya ezininzi ubudala kwaye impressive zembali iindawo, afana Ibandla Ngcwele Upetros Nopawulos, i-Basilica ka Ngcwele Willibrord, i-i-gothic styled imarike, kwaye Roman villa ukuba imihla emva amaxesha elungiselela empire. Ehamba ngokusebenzisa ezitratweni ka-Echternach uza bazive ngathi ufuna kwi-medieval phinda-phinda. kunjalo, kuya kuba bonke comforts ye-bale mihla lwehlabathi kunye hayi onzulu iminyaka.
4. Carcassonne, Fransi
Carcassonne yi medieval town oko kukuthi walled ngaphandle basuke bubonke ehlabathini. Eludongeni kwaye kweencopho umhla emva 13th century kwaye ngenene nika isixeko ukhangelo nokuva a medieval dolophana. Nowadays, Carcassonne ufumana i-UNESCO Ihlabathi Lemveli Site esikunika kuni ndinovelwano kufuneka behambe emva kwexesha. Le umoya ingane kwaye imilingo sisondela kuzo abakhenkethi abaninzi bafuna ukubona umoya omdala umhlaba.
Narbonne ku Carcassonne
Toulouse ku Carcassonne
Montpellier ku Carcassonne
Nimes ku Carcassonne
5. Most Beautiful Mandulo Town EYurophu – Heidelberg, Jemani
Heidelberg ifumaneka a iselwa inhabitable ariya. Inyaniso, indawo wenziwe ekhaya abantu kuba iminyaka. Kufutshane ukuya emlanjeni Neckar kunye nemozulu sivune Endilimisele indawo ikhaya. Kuyo yonke iminyaka, Nabo wenziwe a umbindi kuba abantu. Inyaniso, oku uyabonakala kwi-ambiance kwaye architecture lwesixeko. I-exquisite Baroque isixeko umbindi kwaye i-incredible castle ingaba nje izinto ezimbini ukuba kubonisa i-richness kwaye benceba ndawo sele boasted kulo lonke ixesha. Hieldberg akazange a ekujoliswe kulo wesibini imfazwe yehlabathi, oko kuthetha ukuba kuya ngxi carries kakhulu kwimbali yayo. Thatha stroll ngokusebenzisa le amazing indawo kwaye bona yonke into ke sele ukunikela.
6. Bern, Swizalend
Xa ke iza medieval ezinemigodi kwi-Central Yurophu, Bern e Switzerland i utyelelo kufanele. I-lovely, ubudala isixeko sesinye ebukeka izixeko Aseyurophu. Ke uzele arcades ukuba umhla emva iminyaka ephakathi kwaye fountains ukuba depict ezahlukeneyo artistic amanani. Inyaniso, xa oko kuza ukuba baseqongeni, Bern sele omnye oyena qokelela ka-unguye ukususela imvumi Upawulos Klee. Ngaphandle ukususela architectural ubuhle kwaye historic izakhiwo kwi-town, kukho kanjalo lovely river kokudlula ke. I-river Aare uyaya ngokusebenzisa isixeko kwaye lenza kakhulu picturesque. UMark Bern yindawo yokuhlola kuhambo lwakho olulandelayo eSwitzerland.
Zurich To Bern Uqeqesha
Geneva To Bern Uqeqesha
Interlaken To Bern Uqeqesha
7. Most Beautiful Mandulo Town EYurophu – San Gimignano, ElamaTaliyane
San Gimignano yi iincwadi zezifundo induli town ukusuka Tuscany. Oko kuzoba kwi-amawaka visitors kunye yayo medieval isi-Italian jonga. Eyona utsalekoname kwi-Firefox Gimignano ingaba idityanisiwe ka-breathtaking kweencopho ukuba umhla emva 14th century. Xa indawo wawa phantsi umthetho ka-Florence, bonke kodwa ishumi elinesine lee-asixhenxe nesibini kweencopho atshatyalaliswa. Namhlanje town ufumana i-UNESCO Lemveli site, kwaye kufuneka abone ukuba nabani na onomdla Italy ubutyebi bembali kunye umdla.
8. wasebenzisa, Bheljiyam
Abaninzi jonga wasebenzisa njengoko Venice Lasentla. Ke uzele canals, cobbled iindlela, kwaye picturesque i_zikwere ukuba ingaba surrounded yi-soaring kweencopho kwaye amabandla. Ezi zilungile ezinye attractions ukuba azise amawaka abakhenkethi kule fascinating isixeko. Ukuhamba nge Bruges uya kukulahlela Bayayoyika umxube endalo kunye izimanga yezakhiwo. Akukho shortage ka-medieval izakhiwo kwi-town, kwaye uyakwazi qiniseka ukuba utyelelo oku town uza kushiya kuwe amazed ngomhla ubuhle noxolo indawo radiates.
9. Most Beautiful Mandulo Town EYurophu – Lillafured, Hangari
Lillafured ingaba olugqibeleleyo jetta of nature kwaye medieval architecture. Ebekwe olandelayo ukuba Lake Hamori kwi-Hungary, kuba indawo kumelwe utyelelo. Ku ekuqaleni kwakhiwa njengecebo yi Count Andras Bethlen. kunjalo, ngokuhamba kwexesha, waba town kwaye lovely hotel. Inqaba emangazayo yile ujikelezwe ngumjelo wamanzi, yendalo caves, bentaba, kwaye nkqu hanging iigadi. Njengokuba ubona, Lilafured nguye indawo ephelele kubathandi bemvelo.
10. Montepulciano, ElamaTaliyane
Ngexesha kokudlula sunny kwaye picturesque Tuscan rolling iinduli, mhlawumbi kuza phezu medieval town ezintabeni – Montepulciano. Oko sele yonke into ungakwazi ndifuna ukusuka kwi-i-Italian dolophana. Eyona attractions ziquka izinto ngathi amazing iwayini, inqaba yamandulo ezindongeni, ukutya okumnandi, kwaye nkqu thermal springs. Kubaluleke ngenene a charming ndawo ukuba uza khumbulani ngonaphakade. Qiniseka ukuba yeka yi-xa ufuna ngonaphakade abajikelezayo nge-Italy.
Siena ku Montepulciano Uqeqesha
Grosseto ku Montepulciano Uqeqesha
UFlorence Montepulciano Uqeqesha
ERoma ukuze Montepulciano Uqeqesha
Xa ke iza medieval zixeko ezinemigodi, Yurophu uzele kwabo. Ethabatha ixesha lokundwendwela ezi coves ka-inkcubeko kunye imbali uza enrich yakho iimboniselo kwi ntoni ngabantu capable ye. Incwadi A Ukuqeqesha on time and visit the countries that most draw your interest.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “10 Uninzi Iidolophu Beautiful Mandulo EYurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-medieval-towns-europe%2F%3Flang%3Dxh – (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#beautifultowns #traveleurope ephakathi medievaltown tips uloliwe train Travel